FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA BOERBOEL - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Boerboel
Duke the Boerboel amin'ny 1 taona
alika malamute volamena retriever afangaro alika kely
Boerboel Afrikana Tatsimo
Mastiff Afrikana Tatsimo
Alika miasa lehibe, matanjaka ary manan-tsaina ny Boerboel. Izy io dia mahay mandanjalanja tsara amin'ny fivoaran'ny hozatra tsara ary mampihetsi-po amin'ny hetsika. Ny alika dia tokony ho mahavariana sy mametraka. Ny alika lahy dia miharihary fa vavy sy vavy ny vehivavy. Ny faritra rehetra amin'ny vatana dia tokony hifanaraka. Ny loha no endri-javatra lehibe indrindra amin'ny Boerboel, satria maneho ny toetrany tanteraka. Fohy, malalaka, lalina, toradroa ary hozatra miaraka amin'ny takolaka feno famenoana. Ny ampahany eo anelanelan'ny maso dia tsy maintsy fenoina tsara. Ny tampon'ny loha dia malalaka sy fisaka, miaraka amin'ny fivoaran'ny hozatra malaza. Ny tarehy dia tokony hifangaro symmetrika amin'ny loha, ary afaka miaraka na tsy misy sarontava mainty. Tokony ho hita ny fijanonana fa tsy malaza. Mainty ny vavam-borona ary misy vavorona lehibe izay misy elanelana be. Ny taolana orona dia mahitsy sy mifanitsy amin'ny topline amin'ny loha izay lalina sy malalaka ary misy taper kely mankany aloha. Ny taolana orona dia tokony ho 8-10 cm ny halavany. Ny molotra ambany sy feno nofo dia tokony hanarona ny molotra ambany, fa tsy tokony hahantona ambany noho ny valanorano ambany. Ny valanoranony (mandibles) dia matanjaka, lalina sy malalaka ary somary tery mankany aloha. Ny nify dia tokony ho fotsy, mandroso tsara, misy elanelana tsara, miaraka amina nify 42 sy manaikitra amin'ny hety. Ny maso midorehitra sy mioritra dia alokaloka volontany, fa maizina kosa avy eo ny vongan-tongony, miaraka amin'ny hodi-maso miloko tsara sy miloko tsara. Ny sofina dia tokony ho antonony habe, miendrika V ary tokony hitovy amin'ny loha. Izy ireo dia napetraka somary avo sy malalaka amin'ny loha. Rehefa mailo ny alika dia tokony hamorona tsipika mahitsy amin'ny tampon'ny loha ny sofina. Ny vozony dia mampiseho fiolahana hozatra tsikaritra, ary miraikitra ambony amin'ny soroka. Ny hatoka matanjaka sy hozatra dia lava halavany ary mitovy amin'ny ambin'ny alika. Ny hoditry ny hatoka dia malalaka eo ambanin'ny tenda ary manjary mikatona eo anelanelan'ny tongony aloha. Somary tery mankany amin'ny valahana ny vatana. Tokony ho mahitsy ilay topline. Ny lamosina dia mahitsy, malalaka ary mifanaraka, misy hozatra lamosina malaza ary valahana fohy. Malalaka sy matanjaka ny rump, miaraka amina fivoaran'ny hozatra tsara. Hozatra, malalaka sy matanjaka ny tratra. Ny rambony fohy sy fohy dia miraikitra ambony amin'ny vatana. Ny tongotra eo anoloana dia tokony hitsangana tsara. Ny paws aoriana dia somary kely kokoa noho ny tongony eo anoloana. Ireo paosin-dambam-baravarana milomano tsara dia boribory amin'ny rantsan-tongony mainty miolakolaka. Ny tongo dia tokony hanondro mahitsy. Tokony hesorina ny godclaws. Ny hoditra dia matevina, malalaka, miforitra tsara miaraka amin'ny ketrona antonony eo amin'ny handrina rehefa mailo ny alika. Ny palitao fohy sy matevina ary marevaka dia tonga amin'ny krema fotsy, hatsatra mavo, mainty, volontany mena, volontany ary ny volon'ny brindle rehetra.
Ny Boerboel dia azo itokisana, mpankato ary manan-tsaina, miaraka am-piambenana mahery sy alika mpiambina. Matoky tena izy ary tsy matahotra. Ny Boerboel dia be lalao sy be fitiavana amin'ny tompony. Ny fialam-boly ankafiziny indrindra dia ny filalaovana fitiavana fakana isa-minitra laniny amin'ny tompony. Mahery ny valanoranony ary matetika no alefan'izy ireo ilay baolina nilalaovany. Tsy tokony hihozongozona fa hilalao fotsiny ilay baolina nipoitra! Tena malemy fanahy izy ireo ary tsara miaraka amin'ny ankizy fantany mamela azy ireo hitaingina ny lamosiny toy ny soavaly, tia isa-minitra ny fiheverana azony. Boerboels dia hanao tsara amin'ny alika hafa, saka ary biby hafa tsy kaninina hafa, avelany hidina ny vorona ary haka avy ao anaty fitoeram-bokiny! Hiambina ny fianakaviany, ny namany ary ny fananany amin'ny fiainany izy ireo. Rehefa tsy ao an-trano ny tompony dia tsy hamela olona hiditra ao an-trano izy ireo, raha tsy hoe fantany tsara izy ireo. Rehefa tonga ny mpitsidika tonga dia horaisin'izy ireo aorian'ny fampahafantarana azy ireo tsara. Ity karazana ity dia mitaky a tompony manjaka . Ny fahefana ananan'ny tetik'asa amin'ny alika dia tokony ho mafy tokoa ka tsy hanao ilay alika bolt mivoaka ny varavarana eo aloha rehefa nosokafana. Ny tanjona amin'ny fampiofanana an'io alika io dia ny hahatratra ny toeran'ny mpitarika pack . Voajanahary voajanahary ho an'ny alika ny manana baiko ao anaty fonosany . Rehefa isika miaina miaraka amin'ny alika ny olombelona , lasa fonosin'izy ireo izahay. Ny fonosana iray manontolo dia miasa eo ambanin'ny tsipika mpitondra tokana ary voafaritra mazava tsara ary apetraka ny fitsipika. Satria alika dia mampita ny tsy fahafaliany amin'ny mimonomonona ary amin'ny farany manaikitra, ny olombelona hafa rehetra TSY MAINTSY avo kokoa amin'ny filaharana noho ny alika. Ny olombelona no tokony hanapa-kevitra fa tsy ny alika. Izay no fomba tokana ahafahan'ny fifandraisanao amin'ny alikao hahombiazana tanteraka. Raha misy tsy mahatakatra an'io hevitra io 100% ary matoky fa afaka mitantana karazana mpiambina lehibe toy izany izy ireo dia tsy izy ilay alika. Miaraka amin'ny tompony mety ny Boerboel dia afaka manao biby mahafinaritra.
Haavony: Lehilahy 25 - 28 santimetatra (64 - 70 cm) Vehivavy 23 - 25.5 santimetatra (59 - 65 cm)
Lanja: 154 - 200 pounds (70 - 90 kg)
Noho ny fisafidianana artifisialy ny Boerboel dia karazany salama tokoa.
Ny Boerboel dia tsy atolotra ho an'ny fiainana an-trano. Tokony, fara faharatsiny, manana tokontany malalaka misy fefy mihazakazaka sy milalao. Ny Boerboel dia afaka miaina ivelan'ny trano. Ity karazany ity dia tsy tokony avela hihazakazaka irery satria tena miaro ary indraindray tsy dia mandray tsara amin'ny olon-tsy fantatra.
Ny Boerboel dia hahazo fanatanjahan-tena betsaka raha toa ka misy tokontany malalaka hihazakazahana sy hilalaovana. Na izany aza mila raisina a dia an-tongotra lavitra isan'andro . Boerboels dia te-hilalao ary te-hilalao lalao baolina.
Manodidina ny 10 taona
Alikakely 7 ka hatramin'ny 10 eo ho eo
Ny Boerboel dia mora ampiasaina. Fanosotra tsindraindray sy fandroana ary fandroana isam-bolana no ilain'izy ireo. Ity karazana ity dia mpitrandraka antonony.
Ny fivoaran'ny Boerboel dia azo faritana ara-drariny ho tena tantaram-pahombiazana any Afrika atsimo ary fanilo ho an'ireo izay nanao fandraisana anjara hanatsarana ny karazany. Ny fanadiovana ny karazany dia mbola eo an-dàlam-pandrosoana. Betsaka ny zavatra efa nosoratana tamin'ny fiavian'i Boerboel saingy tsy misy olona afaka milaza marimarina fa amina alika iray na roa na maromaro io. Ny voamarina amin'ny fanadihadiana dia i Jan van Riebeeck izay nitondra 'bullenbijter' niaraka taminy tamin'ny nahatongavany tany Cape. Ity alika ity dia karazana matanjaka lehibe izay nampatsiahy ny iray amin'ireo karazana alika Mastiff. Ireo izay nanaraka an'i Van Riebeeck nankany Cape dia nitondra ihany koa ny alika lehibe indrindra sy matanjaka indrindra ary nandritra ny am-polony taona maro izay ihany no matanjaka indrindra velona tany amin'ilay tany efa lao ankehitriny. Tamin'ny fahatongavan'ireo Britanika Mponina tao 1820 dia nentin'izy ireo ho an'ny hafa ny karazana alika Bulldog sy Mastiff. (Tamin'ny 1938, ny tena Bull Mastiff dia nampidirin'i De Beers ho any Afrika Atsimo hiambina ireo toeram-pitrandrahana diamondra.) Fantatra ihany koa fa nanafatra tompon-daka azo avy amin'ny Hottentots izy, izay nandray anjara tamin'ny fampandrosoana ny Boerboel. Ny 'Boerdogs' (araka ny ahafantarana azy ireo) dia naparitaky ny Voortrekkers nandritra ny Great Trek ary nanohy nitombo niaraka tamin'izy ireo izy ireo. Araka ny fomban-drazana, taorian'ny Ady Anglo Boer tamin'ny 1902, ireo alika ireo dia niara-niraoka tamin'ny Bulldog lava tongotra anglisy ary niaraka tamin'i Bull Mastiff tamin'ny faran'ny taona 1950 tany ho any. Ny tantara dia fantatra indrindra amin'ireo mpamboly ao amin'ny North-East Free State, Northern Natal ary any amin'ny faritra Transvaal.
EBBASA = Fikambanan'ny mpiompy elite Boerboel any Afrika Atsimo Boerboelclub (Nederland)
HBSA = Ny klioban'ny Boerboel manan-tantara any atsimon'i Afrika
RIBC = Club Iraisam-pirenena Rosiana Boerboel Club Samba Global
SABT = Fikambanan'ny Boerboel Afrikana Tatsimo
SAMBA Global = Fikambanana iraisampirenena, izay ny tanjony voalohany dia ny manampy ny fiarovana sy ny fampandrosoana ny Boerboel Afrikana Tatsimo
USBA = Fikambanana Boerboel any Etazonia
Mia the South Africa Boerboel amin'ny maha alika azy amin'ny 6 herinandro eo ho eo
Mia the South Africa Boerboel amin'ny maha-alika azy 6 volana
Keano, Boerboel folo volana avy any Cape Town, Afrika Atsimo
Otis, Boerboel afrikanina iray 2 taona, milanja 150 lbs., 'Tiany ny mandry amin'ny alokaloky ny ankizy.'
Bolt ny alika kely Boerboel amin'ny 5 herinandro— 'Bolt dia Boerboel madio hoditra izay mafana sy mahafinaritra.'
Sary natolotry ny Desert Sky Boerboels
mpampijaly amerikana vs pitbull amerikana
Boerboel Bakari Afrikana amin'ny 10 volana sy 130 pounds
Bob the Boerboel - Sary nahazoana alàlana tamin'ny Boerboels an'i Estrones any Botswana, Afrika
Mboys miaraka amin'i Bob sy i Destiny — ireo mpianakavy telo mianaka. Jereo ny haben'ny lohan'izy ireo? Sary natolotry ny Thokwengs 'Boerboels any Botswana, Afrika
Creed ilay alika Boerboel mainty
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Boerboel
Sary Boerboel 1
Sary Boerboel 2
Sary Boerboel 3
Taranaka amboa lehibe fanampiny
kilalao shar pei olon-dehibe
sarin'ny alika mpiambina voalavo
poodle mahazatra mainty sy fotsy